Nihoatra ny 10 000 ireo nifindran’ny valanaretina : manakaiky ny 100 ny isan’ireo lavon’ny Covid-19 | NewsMada
Nihoatra ny 10 000 ireo nifindran’ny valanaretina : manakaiky ny 100 ny isan’ireo lavon’ny Covid-19
Par Taratra sur 29/07/2020
Tsy mitsahatra mirongatra ny Coronavirus eto amintsika. Nihoatra ny 10 000 ireo nifindran’ny valanaretina hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Tsy vitan’izany fa miisa 93, efa manakaiky ny 100, ny isan’ireo lavon’ny covid-19. Faritra 20 amin’ireo 22 ny efa ahitana izany ary efa tafiditr’izany koa ireo distrika miisa 59 amin’ireo 119. Anisan’ny nidirany farany ny any Vangaindrano.
Mbola ivon’ny Covid-19 Analamanga, na eo amin’ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina na ny isan’ireo maty ary koa eo amin’ireo « forme grave ».
Niisa roa indray ireo lavo ka tetsy Befelatanana sy tany Mahanoro izany. Niakatra be indray koa ny isan’ireo nifindran’ny covid-19. Miisa 414 izany ka avy eto Analamanga ny 347. Avy any Boeny ny 20 raha 13 ny any Alaotra Man­go­ro. Misa 12 kosa ny any Matsiatra Ambony. Samy efatra avy ny any Atsina­nana sy Atsimo Andrefana raha valo ny any Sofia. Miisa dimy ny any Sava ary iray ny any Anosy.
Avy eto Analamana ireo marary mafy 88 amin’ny 103
Mbola maro anisa amin’ireo marary mafy koa anefa Analamanga. Miisa 88 izany amin’ireo « forme grave » 103. Etsy Befelatanana, misy 51. Miisa 16 eny amin’ny HJRA raha 15 eny Anosiala. Telo avy ny eny Fenoarivo sy ny etsy Andohatapenaka ary iray kosa ny eny amin’ny Homi, Soavinandriana.
Ahitana marary mafy miisa enina avy ao Antsirabe sy avy any Fianarantsoa.
Roa kosa ny any Boeny. Na izany aza, 353 ireo sitrana vaovao tamin’ny antontanisa, omaly.
Tafakatra 10 104 izany izao ireo tratran’ny Corona­virus. Efa nisy sitrana miisa 6 613 izy ireo ary miisa 3 398 ireo mbola manaraka fitsaboana. Miisa 39 415 kosa ireo fitiliana vita.